गगन भन्छन्- नयाँ सरकारको नेतृत्व देउवाले होइन कांग्रेस भित्रैबाट अन्य नेताले गर्नु पर्छ !(भिडियो) – Halkhabar kura
४ चैत्र २०७७, बुधबार १८:४८
गगन भन्छन्- नयाँ सरकारको नेतृत्व देउवाले होइन कांग्रेस भित्रैबाट अन्य नेताले गर्नु पर्छ !(भिडियो)
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू सडकमा उत्रिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सडक आन्दोलन गरेर असंवैधानिक कदमको विरोध गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना परेपछि नेपालको राजनीति सोचेजति सहज भएन।
सर्वोच्चले अर्को फैसला सुनायो फागुन २३ गते। जुन फैसलाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरिदियो। अहिले संसदमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दल छन्। यही परिप्रेक्षमा अबको कांग्रेसको रणनीति, सरकार गठन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापासँग स्वदेशनेपालकर्मीले गरेको कुराकानीः
–संसद् पुनर्स्थापना भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुबै घटकले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले २ कारणले गर्दा यसमा अग्रसरता नलिने भन्यौं। एउटा नेकपासँग संसद् ६४ प्रतिशत मत छ। तपाईहरुले सरकार चलाउने म्याण्डेड पाउनुभएको हो। हाीम्ले प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेड पाएका हौं। राजनीतिक कारणले पनि यो गलत हुन्छ।
अर्कोे कुरा रणनीतिक कारणले पनि गलत हुन्छ किनकि हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बदलिनुपर्छ भन्ने चाहना राख्थ्यौं जुन, स्वभाविक पनि हो। असंवैधानिक कदम चालेर अघि बढ्न खोजनुभएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सामना गर्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो। तर, अदालतको फैसलाले नेकपा नै रहेन। सरकार चलाउने म्याण्डेड पाएको पार्टी नै नरहेपछि यसले राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो। अब कोहीसँग नि बहुमत छैन।
नेकपा छैन एमाले र माओवादी भयो र उहाँहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बदल्न चाहन्छौं र देशलाई सम्हालेर निर्वाचनमा लिएर जान चाहन्छौं। प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता रहेमा उहाँले थप संवैधानिक अन्यौलता सिर्जना गर्दै लैजानुहुन्छ र फेयर निर्वाचन पनि गराउनु हुन्न। आफ्नो पार्टीको आफ्नो सहकर्मीसँग त यति असहिष्णु प्रधानमन्त्रीले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरु राजनीतिक दलमाथि कहीँ कतै सहिष्णुता राख्नुहुन्न।
त्यसकारण अब कांग्रेसले अग्रसरता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा एमालेभन्दाबाहेक अरु पार्टीलाई मिलाएर सरकार बनाउने र उचित समयमा देशलाई चुनावमा लैजाुपर्छ। देशमा चुनावबाट नयाँ म्याण्डेड प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। यसकै लागि हामी अहिले जनता समाजवादी पार्टी, माओवादीसँग छलफल गरिरहेका छौं।
जाँतोलाई भन्दा हाँतोलाई खसखस भनेजस्तै गगनजीहरुलाई सत्तामा जानै हतारो भइरहेको छ भन्छन्। नेपाली कांग्रेसले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न आफैंमा लडिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो अवस्था बनाइदिएका छैनन्। प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थज पनि फिर्ता लिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले कसरी त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
–माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भन्ने कुरा त समर्थन फिर्ता लिने होकि अर्कोतिरबाट तिमीहरुको समर्थन मैले छोडिदिए भनेर कसले पहिले भन्ला भन्ने मात्र छ। यसमा अनमोल नहोला। मुख्य कुरो जनता समाजवादी पार्टीले यो कुरामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो।
नेकपा ओली र प्रचण्ड पक्षमा विभाजित भएका बेला कांग्रेसले सरकारमा जान्छु भन्नु गलत हुन्थ्यो। तर, अहिले कांग्रेस सुतेर बस्न भएन। कि त प्रधानमन्त्री ओली जिन्दावाद भनेर तपाई नै चलाउनुहोस् तपाईबाहेक कोही छैन भन्नप¥यो। माता पनि तपाई पिता पनि तपाई हो, तपाईबाहेक कसले सक्छ र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन मै राख्नुस्, जसपालाई नि लिनुस् सबै मिलाएर २ वर्ष चलाउनुस् चुनाव गराउनुस् भन्ने होकि सिधै। अस्तिसम्म प्रधानमन्त्री बदले कि माधव नेपालले बदल्थे कि प्रचण्डले बदल्थे।
त्यही दलले बदल्थे तर अब बल्ल प्रधानमन्त्री बदल्ने कुरा हाम्रो पोल्टामा आयो। गणितीय हिसाबले आइसक्यो हामीले प्रयास गरेपछि न बदलिने हो अब त। कांग्रेसले जसपा र माओवादी केन्द्रलाई बोलाएर सरकार बदल्ने कुरामा म नेतृत्व गर्छु तपाईहरुले मलाई मद्धत गर्नुपर्छ भनेपछि जसपा र माओवादी त्यसैअनुसार सोच्न थाल्ने हो।
हामी बुढानिलकण्ठमा सुतेर बस्यौं ठीक भएन। कांग्रेस चुपो लागेर बस्यो भने जसपालाई त यो फेरि तपाईले भनेजस्तो जाँतोलाई भन्दा हाँतोलाई खसखस भनेजस्तो हुन्छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा छ, नेपाल कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्दैगर्दा त्यहाँ मन्त्री बन्ने न मेरो चाहना छ न मैले गएर काम गर्छु। मैले पार्टीको फोरममा काम गरिरहेको छु मैले सांसद भएर काम गरिरहेको छु। कांग्रेसको हित केमा हुन्छ त्यही हेर्ने हो। त्यससँगै यो सिस्टम कहाँबाट जोगिन्छ हेर्नुपर्छ।
हेनुहोस् नेता गगन थापासँग गरिएको अन्तरवार्ताः
Previous खुनको कमी (रक्ताल्पता) हुँदा खानु पर्ने खानेकुराहरू – डा. हेमराज कोइराला
Next एमाले फुटैको संघारमा पुग्दाखेरि ओली समूहले किन यसरी नाचगानसहित उत्सब मनायो (भिडियो)